Halloween costume ideas inspired by Tim Burton films – Ariel's Style
By arielthi2020 27/10/2020 31/12/2020
Tim Burton ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ Movies တွေထဲကနေ Halloween Day အတွက် လိုက်ဖက်ပြီ DIY လဲ လုပ်လို့ရမဲ့ Characters လေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ October 31 #HappyHalloweenday #CostumeHalloweenday နေ့လေးမှာတော့ Party လေးတွေ လုပ်လို့မရပင်မဲ့ ☺️ Fb/ Instagram မှာ ပုံလေးတွေတင်ပြီတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်စရာ Happy Halloween day နေ့လေးကို ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲ့တော့ ဘယ်လို Costume & Make up လေးတွေ ပြင်ရင် ကောင်းမလဲ ။ Movies လေးတွေထဲက Costume လေးတွေ ကို DIY လေး လုပ်လို့ရအောင် Idea လေးတွေ Share ပေးလိုက်တယ်နော်။
ခါးတွင် ခါးပတ်ပတ်ပြီး Peplum စကပ် အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်အစင်းများကို ဘောင်းဘီရှည် ၊ဒါမှမဟုတ် ခြေအိတ်ရှည် ၊ Gothic 1950 pin-up နဲ့တူ perfectly Carter၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ဆောင်စတိုင် ကို ပြုလုပ်လိုရပါတယ်။
Mrs. Lovett Times is Hard
Tim Burton ရဲ့ Batman Returns မှာ Catwoman အဖြစ် Michelle Pfeiffer ရဲ့ထင်ရှားသော catsuit၊ လက်သည်းများ၊ ခေါင်းအပြည့်မျက်နှာဖုံး၊ လူသတ်သမားဒေါက်နှင့်သူမ၏နှုတ်ခမ်းနီ ၊ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းကတော့ Halloween Costume အတွက် လိုက်ဖက်ပါတယ်။
CATWOMAN Halloween Makeup & Body Paint ♡ BATMAN RETURNS INSPIRED!! | TheFauxChanel
Burton ရဲ့ Wonderland အတွက် Hathaway ရဲ့ဝတ်စုံကို ruffles, ပျက်စီးလွယ်သောဇာနှင့်တောက်ပသောအဖြူရောင်ကိုသုံးထားတာပါ ။ သို့သော်လည်းနတ်သမီးပုံပြင်မင်းသမီး၏အိပ်မက်များကို ၀တ်ဆင်သည့်အ၀တ်အစားဖြစ်သော်လည်းတချိန်တည်းမှာပင်မှောင်မိုက်အံ့ဖွယ် ခံစားရစေတဲ့ Hathaway က သူမ၏ဇာတ်ကောင်မှာ “punk-rock, vegan pacifist” ပုံစံကိုပါ တွေ့မြင်ရမှာပါ။
ဟုတ်ပါတယ် သူမကာတွန်းဇာတ်ကောင်ပါပဲ။ သို့သော် Sally ရဲ့ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကတော့ ကျွန်မတို့၏အကြွင်းမဲ့အကြိုက်ဆုံး Burton ဖက်ရှင်အချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မုန်ညင်းနှင့်ကြက်သွေးရောင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်င်္အကျီတစ်ထည်သည် မင်းသမီး၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်ပြီး အမြင်တစ်မျိုးဖြင့် Disney ကားလေးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ Halloween Day အတွက် Costume အနေနဲ့ ဖန်တီးမယ်ဆို နှစ်သက်ဖွယ် အရသာကိုပေးနိုင်မဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်မှာပါ
Burton’s Wonderland ရဲ့ Carter ၏ဝတ်စုံက အဲလစ်ဇဘက်စ်ဂါဝန်ကိုကာတွန်းပုံစံဆန်ဆန်တွေ့ရမှာပါ။ Vivienne Westwood Vibe အနေနဲ့ရောင်စုံကစားကဒ်ပြားများနဲ့ ဇာ၊ ဖဲ စတာတွေ နဲ့ အသက်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝတ်စုံလေးကတော့ Cosplay အနေနဲ့ Costume များကို ဝတ်ဆင်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအနေတော့ DIY ပြုလုပ်ပြီ ပုံပြင်ဆန်ဆန် ခြယ်သမယ်ဆိုရင်တော့ Halloween Costume အနေနဲ့ ပျော်စရာ ခြယ်သမှုမျိုးဖြစ်စေမှာပါ။
Red Queen DIY
ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ monochrome လောကမှာ ဖုတ်ကောင်သတို့သမီးဟား နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသောအပြာဖျော့ရောင် စကတ်အင်္ကျီတစ်ထည်နှင့်သူမ၏ခေါင်းပေါ်တွင်နှင်းဆီပန်းများနဲ့ သရုပ်ဖော်ထားတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်၊သူမအလောင်းကောင်ပုံစံပါ ။ဒါပင်မဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံ ဂါဝန်ကတော့ သင်္ချိုင်းမြေမှုန့်များနှင့်ပိုးမွှားအားလုံးရှိနေသော်လည်း ကျွန်မတို့တွေ့ဖူးသမျှ မှာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဝတ်စုံတစ်ခုပါဘဲ။အခုလို Emily ရဲ့ ဝတ်စုံကို Halloween day မှာ ပြုလုပ်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ အမှတ်တရ ပျော်စရာကောင်းသောနေလေးအနေနဲ့ပါ ဖန်တီးမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကယ် အားလုံးလဲ Happy Halloween Day အနေနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီးတော့ Stay-Home ကာလမှာ ပျော်စရာနေလေးအနေနဲ့ ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ Thi’s Fashion Alliances မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
Corpse Bride – Tears to Shed HD
Emily from Corpse Bride DIY
in depth corpsebride makeup tutorial talk through (plus diy costume!)
Written by Ariel Thi
CategoriesBlog look-Book Styling TipsTags#Thi_Fashion_AlliancearielstyleHalloweenfashionHalloweenOutfitshappyhalloweendaythifashionalliances
PreviousPatricia Field X Emily in Paris